Site n'iji ike itinye aka na ntughari nke ọdịnaya vidiyo, ị nwere ike imeghe ikike ịre ahịa ika na YouTube. N'ịbụ onye nchọta nke abụọ kachasị ukwuu, ikpo okwu nkekọrịta vidiyo nke Google nwere nwere ike inyere gị aka ịmepụta ụdị na-eme nke ọma…
YouTube apụtala dị ka ụzọ na-enye ego maka ikesa na ịkpata ọtụtụ ọdịnaya. Ndị na-emepụta ọdịnaya anabatala usoro mgbasa ozi ọha na eze dịka ụzọ siri ike nke nkwurịta okwu. Na-agba ọsọ ọwa YouTube, agbanyeghị, bụ…
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka mkpebi na-enweghị isi na mbụ, ikpebi ụdị agba dị mma maka ọwa YouTube gị dị mkpa maka ịhụ na ị ga-aga nke ọma n'elu ikpo okwu. Amara agba na-emetụta nke ukwuu…
Mkpa + nkeonwe = Ihe ịga nke ọma na YouTube Ịmekọrịta algorithm YouTube siri ike na nke siri ike abụghị obere achicha maka ndị na-ere ahịa. YouTube, nke nwere ebe ọrụ ihe karịrị ijeri abụọ, bụkwa nke abụọ kachasị ukwuu…
15th nke February 2022